Ụbọchị: 12 November 2019
Businesswa azụmahịa Bursa, urslọ Azụmahịa na Ahịa (BTSO) na Russian Federation Moscow Region Governorate na mmekorita ya na Daysbọchị Nkwalite Moscow na Nzukọ Azụkọ Azụkọ na ndị ahịa Russia. [More ...]
Etu esi ahazi usoro OSB / Törekent Koru Metro Line; Ankara Metro Facility OSB / Törekent-Koru akara n’oge oge oyi nke ụtụtụ na mgbede elekere (07.00-09.30 na 16.00-20.00) 40 ụgbọ setịpụrụ na ihe dịka. [More ...]
Udiri Ankara YHT 13 ga-amalite na Jenụwarị; 13 na Ankara Disemba 2018 Ikpe nke onye ebubo ebubo 9, nke butere ọnwụ nke onye 10 na 13, ga-amalite na Jenụwarị 2020. 13 Disemba [More ...]
Na Aksaray, 90 ሺህ Saplings chịkọtara ma mkpọchi ederede 'Breathe to the Future'; Minista Turhan sonyere na emume a haziri ahazi na Alayhan Junction nke Ankara-Kırşehir-Aksaray-Niğde Motorway n'ime usoro mkpọsa nke Minista na Ọrụ Ugbo na Oke Ọhịa mebere. [More ...]
A ga-eji ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ dị mkpụmkpụ belata; Mmemme Kwa Afọ nke Onye isi oche nke 2020 gụnyere itinye ego na ụzọ ụgbọ elu, yana usoro ọmụmụ banyere High Train Train (YHT) emeela. Transportation [More ...]
Ọnọdụ arụ ọrụ na-adịghị mma nke ndị ọrụ TGS na-arụ n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul na-aga n'ihu. Ndị otu ndị ọrụ ụgbọ elu (Hava-Sen) kwuru na nkwupụta ha na ha kwesịrị iche maka ndị ọrụ ahụ n'agbanyeghị na ha abụghị ọgbakọ akwadoro. [More ...]
Ememe ncheta Behiç Erkin, nna nna okporo uzo ugbo ala n’ememe ncheta nke 58 nke onwu ya; Tepebaşı Mayor Dt. Ahmet Ataç bụ onye guzobere na onye isi njikwa mbụ nke State Railways. ya mere ncheta ọnwụ [More ...]
Ọtụtụ ụgbọ agha na-enweghị ọrụ na Köseköy Logistics Center nọ na Mgbakọ; Onye isi oche HDP Kocaeli Ömer Faruk Gergerlioğlu jụrụ ebubo na ọtụtụ ụgbọ ala adịghị arụ ọrụ na Köseköy Logistics Center Peoples Democratic Party (HDP) osote Kocaeli [More ...]
Lightsgbọ elu Crimea Russia nke Crimea Amalite; Site na owuwu nke Crimea, a na-ejikọ ala Russia na ala nke Crimea, Moscow na St.Petersburg, nke a na-atụ anya na ọ ga-amalite n'oge na-adịghị anya, tiketi ụgbọ oloko kwụsịrị gosipụtara mmasị dị ukwuu. 25 [More ...]
Asphalt na-arụ ọrụ na Yedikuyular Ski Center Road; Mgbe emechisịrị mgbasawanye na ọrụ ejupụta na akwara a na-ebuga Yedikuyular Ski Center, ọkachasị ndị bi na Bertiz, Büyükşehir na-aga n'ihu na-arụ ọrụ asphalt. Kahramanmaras [More ...]